एकतामा थप अन्योल : परिवारसहित बिदा मनाउन दाहाल सुकुटे रिसोर्टमा
२०७५ बैशाख ३ सोमबार ०७:२४:००
दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया केही समयका लागि पर धकेलिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मणि दाहालले लेखेका छन् । नागरिक दैनिकमा दुई कोलममा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार महत्त्वपूर्ण वार्ता स्थगित गरेर परिवार लिएर बिदा मनाउन हिँडेपछि दुई पार्टीबीच आगामी ९ गते हुने भनिएको एकता अन्योलमा परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कर्णाली प्रदेशको तीनदिने भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्केलगत्तै अध्यक्ष दाहाल परिवारसहित आराम गर्न सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेतर्फ लागेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यो समाचारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशित गरेको छ । ‘दाहाललाई आफ्नैको दबाब, तनाव छल्न छैटौं पटक सुकुटेमा’ शीर्षकमा पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ – भोटेकोसी किनारको ‘सुकुटे बीच’ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध अनौठो छ । राजनीतिक तनाव भयो कि, दाहाल ‘रिफ्रेस’ हुन हरेक पटक सुकुटे पुग्ने गर्छन् । यसपटक पनि दाहाल तनाव साम्य पार्न आइतबार सुकुटे पुगेका छन् ।
चिरञ्जीवी ढुंगाना र नरेन्द्र साउदले लेखेको समाचारमा एकतामा जानै लाग्दा दाहालमाथि आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको तीव्र दबाब छ । एकीकरण हुँदा सैद्धान्तिकरूपमा आत्मसमर्पण भएको नदेखियोस् भन्ने पक्ष त छँदै छ, माओवादी केन्द्रका एक उच्च नेताका अनुसार दाहाललाई यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दबाब नेता व्यवस्थापनमा परेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले दाहाल सुकुटे बीच रिसोर्ट पुगेको र पछिल्ला घटनाक्रमको टाइमलाइनसहितको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले भने यस समाचारलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले तेस्रो पृष्ठमा सानो समाचार प्रकाशित गरेको छ । यही वैशाख ९ गतेको एकता घोषणा अन्योलमा प्रधानमन्त्री ओली फर्किए, प्रचण्ड सुकुटे पुगे भन्ने समाचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
राजधानी दैनिकले ‘अनुपातमा अल्झियो एमाले–माओवादी एकता’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकले पनि ‘सर्दै एमाले माओवादी एकता’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले सबैको ध्यानाकर्षण गराउने समाचारलाई विशेष प्राथमिकतामा प्रकाशित गरेको छ ।‘अपांगता भएकाले पढ्न नपाउने ?’ शीर्षकमा तस्बिरसहितको बक्स समाचार कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ ।
गणेश राईले लेखेको समाचारमा भनिएको छ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत उच्च अधिकारीले शनिबार मुगुका १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर यस वर्षको भर्ना अभियान सुरु गरे । शिक्षा कार्यालय मुगुले १६ बालबालिकालाई भर्ना गराउन राराताल किनारमा भेला पारेको थियो । तीमध्ये एक थिए, छायानाथ धारा नगरपालिका–६ का अपांगता भएका सात वर्षीय पुन्नबहादुर कुलाल ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले १५ जनालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गराए । ६ वर्षीया थिल्नेसाङ तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध माविमा भर्ना गरे ।
छात्राको अभिभावकत्व ग्रहणको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै उनले तामाङलाई पोसाक र पुस्तकसमेत प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले पनि बुद्ध माविमै छेरिङ छेन्तोम लामालाई भर्ना गराइन् । तर, कार्यक्रममा ल्याइएका कुलाललाई कसैले भर्ना गरेनन् । कारण थियो, अपांगता । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालय मुगुमा छैन ।
विद्यालयमा उनलाई आवश्यक पर्ने संरचना नभएकाले भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार विद्यार्थीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा मात्रै २२ हजार छन् ।
त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले चीनसँगको सम्झौता अलमलमा परेको विषयलाई आज उठान गरेको छ ।
कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित अर्को समाचारे छ – ५ वर्षपछि फर्कियो ‘ध्रुवे’ । पाँच वर्षअघि चितवन निकुञ्जबाट गायब भएको धु्रवे हात्ती आइतबार अचानक निकुञ्जकै पश्चिम सुखीभार जंगलमा देखिएको छ । समाचारअनुसार पहिलेभन्दा बिल्कुल फरक स्वभावमा ।
नागरिक दैनिकले रीतविपरीत सेनालाई हेलिकप्टर खरिद शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । महालेखा परीक्षकले अनियमित ढंगले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ३ लाख सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थाबाहिरै भन्ने शीर्षकमा आज मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
दृष्टिकोण र विचार
रासायनिक तथा जैविक सुरक्षा शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकमा डा. निरञ्जन पराजुलीको विचार प्रकाशित छ । विचारमा भनिएको छ–महिलाले प्रयोग गर्ने विदेशी ब्रान्डेड कम्पनीका सौन्दर्य सामग्रीमा पनि हानिकारक रासायनिक पदार्थ लिड र मर्करीको अवशेष भेटिएको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा ‘कहिले धु्रवीकरण, कहिले एकीकरण’ शीर्षकमा कृष्ण पहाडीको दृष्टिकोण रहेको छ । सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि माओवादी गुरु मोहन वैद्य हतारिएर, डा. बाबुराम भट्टराई बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।
समृद्धिको सम्भावना शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा डा. गोविन्द बहादुर थापाको विचार प्रकाशित छ । लेखमा सबै सम्पदाको व्यवस्थित उपयोग गर्न सकेमा समृद्धि प्राप्त गर्न केही गाह्रो नभएको उल्लेख छ ।
रारा घोषणाको धरातल शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै नागरिक दैनिकले भनेको छ–प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा उतार्न तत्पर हुन सक्ने व्यक्तिहरुले जिम्मेवारी पाए भने अवश्यै उनको रारा घोषणाबाट आएका समस्या समाधान हुनेछ ।
कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीयमार्फत अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । अख्तियारको उदेकलाग्दो मौनता शीर्षकमा भनिएको छ – राज्यका यति धेरै निकायले आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि जिम्मेवारपूर्ण अख्तियार भने न यथाशीघ्र विस्तृत अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउन तम्तयार देखिन्छ न आफ्नो अनुसन्धानमा कहाँ समस्या भइरहेको छ भनेरै सार्वजनिक गर्छ ।
किन आउँछन् शव ? शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा सम्पादकीय प्रकाशित छ । विदेशगमनसँगै दिनहुँ आउने तीन युवाको शव भयानक तस्बिर भएको पोस्टको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सांसदको अनुचित माग शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।